MPANARA-MASO NY FIFIDIANANA : “Azo atao amin’ity taona ity ny fifidianana ben’ny tanàna”
Nitondra ny fanehoan-keviny manoloana ny fihemoran’ny daty hanatanterahana ny fifidianana ben’ny tanàna ny mpanara-maso ny fifidianana Safidy na ny sehatra fanaraha-maso ivon’ny demokrasia ifarimbonana. 31 juillet 2019
Nisy ny valan-dresaka nifanaovany tamin’ny mpanao gazety noentin’izy ireo nampahafantaranao ny tolo-keviny amin’ny fanatontosana ny fifidianana Ben’ny tanàna sy mpanolo-tsaina Kaominaly. Nambarany tamin’ izany fa tsy tokony hisy olana fa azo atao tsara ny manatontosa ny fifidianana ben’ny tanàna amin’ity taona ity. Raha toa ka tsy tanteraka ny 28 oktobra izao io fifidianana io dia azo ahemotra amin’ny volana novambra na desambra ary tsy tokony hihemotra ho amin’ny taona 2020.
Mahakasika ny tsy maintsy hanavaozana ny lisi-pifidianana kosa indray dia nambaran’ny ivon-toerana Safidy fa azon’ny governemanta hatao ny mamoaka lalàna ahafahana manamarina ny lisitry ny mpifidy ivelan’ny fe-potoana fanaovana izany. Isan’ireo fiarahamonim-pirenena navitrika tamin’ny fanaraha-maso ireo fifidianana roa nifandimby teo aloha ny ivon-toerana Safidy. Izy ireo dia nahatsapa tsara ny lesoka tamin’ireo fifidianana ireo ary anisany nanao tsindri-peo manoloana ny tsy fahatomombanan’ny lisi-pifidianana.
Fantatra anefa fa ho fanarenana izany lesoka rehetra izany no antony fihemorana ka tsy tokony hihazakazahana ny fanaovana fifidianana ao anatin’ny tsy fahatomombanana. Anisany nitondra ny heviny ihany koa ny filohan’ny sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara na ny Smm, Clément Jaona. Ho azy dia fanapahan-kevitra politika no tsy namoahan’ny fitondram-panjakana ny didy mampiantso ny mpifidy handatsa-bato. Miankina amin’ity farany no ahafahana miroso amin’ny mampihemotra ny fifidianana iray, araka ny voafaritry ny lalàna mifehy ny fifidianana eto Madagasikara. Voalazany fa safidin’ny mpitondra ihany koa ny hametraka PDS amin’ny fitantanana ny Kaominina na hanalava ny fe-potoam-piasan’ireo ben’ny tanàna aorian’ny fahataperan’ny fe-potoam-piasan’izy ireo, amin’ny volana septambra ho avy izao.